Free Thinker: Foreign Domestic Worker အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Foreign Domestic Worker အကြောင်း သိကောင်းစရာ
HOME ဟု ရေးပြီး ဖွဘုတ်ပေါ်တင်လိုက်ရာမှ ဟိုလူတက်၊ ဒီလူတက်၊ ဟိုကရှယ်၊ ဒီကရှယ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်မှာ အလိုလို နေရင်း ရွှေမန်းတင်မောင်ဖြစ် (ဟုတ်ပေါင်) နာမည်ကြီး (Name with font size 76) လာရလေ၏။ သို့ပြီးတကား ဟိုကမက်ဆေ့ပို့၊ သည်က ဖုံးခေါ်၊ ဖွဘုတ်ကျူရွမ်း (ဟုတ်ပေါင်) ချက်ရွမ်းမှ အကူအညီတောင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်မှာ အလွန် အလုပ်ရှုပ်နေလေသော ဟူသတတ်။
အနာဂတ်တစ်ခု ဖန်တီးတည်ဆောက်ခြင်း စာအုပ်ရေးစဉ်က FDW - Foreign Domestic Worker (ကျေးဇူးပြု၍ maid ဟူ၍သော် လည်းကောင်း၊ အိမ်ဖော်ဟူ၍သော်လည်းကောင်း မသုံးပါနှင့်) များနှင့်ပတ်သက်၍ အနည်းငယ် ထည့်ရေးခဲ့ ၏။ သို့သော် အပြည့်အစုံမဟုတ်။ ယခု သည်အကြောင်း အပြည့်အစုံရေးလိုက်ရလျှင်ဖြင့် ၇ ရက်သားသမီးတို့ အကျိုးများ လိမ့်မည်ဟု ယူဆပါသဖြင့် (အခြားရေးစရာများ ဘေးဖယ်ထားလျက်) ဤစာကို ရေးပါသတည်း။
ဤစာများမှာ Government Gazette ဖြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်၊ ည ၇း၀၀ နာရီတွင် ပထမအကြိမ် ထုတ်ပြန်ထားသော အီလက်ထရောနစ် အက်ဒီရှင် EMPLOYMENT OF FOREIGN MANPOWER ACT; EMPLOYMENT OF FOREIGN MANPOWER (WORK PASSES) REGULATIONS 2012 မှ ဖြစ်ပါသည်။
Foreign Domestic Worker ကို ရှေ့တွင် FDW ဟု သုံးစွဲသွားပါမည်။
မှတ်ချက်။ ။ ၁။ ဥပဒေကြီးတစ်ခုလုံးကို ဘာသာပြန်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ Domestic worker များနှင့် ပတ်သက်သော အပိုင်းကိုသာ ထုတ်နုတ်ပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်၏။
၂။ ဥပဒေပါစာသားများအတိုင်း အတိအကျပြန်ဆိုထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ မူရင်းအဓိပ္ပာယ်မပျောက်စေဘဲ အများနားလည်အောင် ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၁။ အလုပ်ရှင်သည် FDW ၏ စားဝတ်နေရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတို့အတွက် ကုန်ကျမှုအစုစုကို ကျခံရမည်။
၂။ အလုပ်ရှင်သည် FDW အတွက် အန္တရာယ်ကင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် လိုအပ်သော ပံ့ပိုးမှုများ လုပ်ပေးရမည်။ ထိုအထဲတွင်
၁) မြေညီထပ် သို့မဟုတ် ၀ရံတာဘက်တွင်ရှိသော ပြူတင်းပေါက်များမှ အပ ကျန်ပြူတင်းပေါက်များ၏ အပြင်ဘက် မျက်နှာပြင်၊ လက်လှမ်းမမီသောနေရာများကို သန့်ရှင်းရေး မလုပ်ခိုင်းရ။
၂) အထက် အပိုဒ် (၁) တွင်ဖော်ပြထားသော ပြူတင်းပေါက်များကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခိုင်းရာတွင် -
က) ပြူတင်းပေါက် အကာအရံတန်းများ (grille) ကို သော့ခတ်ထား (သို့မဟုတ်) မပွင့်နိုင်စေရန် ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲတုပ်နှောင်ထား ရမည်။
ခ) FDW သည် ပြူတင်းပေါက်အတွင်းဘက် အခန်းထဲ၌ပင် ရှိနေရမည်။
ဂ) လက်မှအပ FDW ၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် အပြင်ဘက်သို့ ကိုင်းထွက်မနေစေရ။
ဃ) အထက် အပိုဒ် က၊ ခ၊ ဂ တို့တွင်ဖော်ပြထားသည်တို့ သေချာစေရန် အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်၏ကိုယ်စား အရွယ်ရောက်သူ တစ်ဦးဦး၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်သာ လုပ်စေရမည်။
၃။ အပိုဒ် (၂) တွင် ဖော်ပြထားသည်နှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်ခန့်ထားစဉ်အတွင်း FDW အား ၎င်း၏ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစေရေး အတွက် အန္တရာယ်တစုံတရာ မကျရောက်စေရ။ ထိုသို့အန္တရာယ်ကင်းရန် FDW သည် သင်တန်းတွင်ပို့ချလိုက်သည့်အတိုင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ သင်တန်းစာအုပ်များတွင် ညွှန်ပြထားသည့်အတိုင်း လိုက်နာလုပ်ကိုင်ရမည်။
၄။ အလုပ်ရှင်သည် FDW အတွက် သင့်တော်သော နေရာထိုင်ခင်း စီစဉ်ပေးရမည်။ ထိုနေရာထိုင်ခင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းမှ သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်။
၅။ FDW သည် ၀ပ်ပါမစ်ကဒ်ပြားထဲ၌ ဖော်ပြထားသည့် လိပ်စာတွင်နေထိုင်ကြောင်း အလုပ်ရှင်သည် သေချာစေရမည်။
၆။ FDW ၏ ပုံသေလစာကို သတ်မှတ်ထားသော နောက်ဆုံးလခထုတ်ရက်မှ ၇ ရက်ထက်ပိုပြီး နောက်မကျစေဘဲ ထုတ်ပေး ရမည်။ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားသဘောတူစာချုပ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော လစာကာလမှာ တစ်လထက် မပိုစေရ။
၇။ FDW သည် လစာမဲ့ခွင့်နှင့် စင်ကာပူပြင်ပတွင် ရောက်ရှိနေသည်မှ အပ အလုပ်ရှင်သည် (အလုပ်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည် ဖြစ်စေ) -
က) WP လျှောက်ထားစဉ်အခါက ဖော်ပြထားသည့် ပုံသေလစာထက် မလျော့နည်းစေရဘဲ
ခ) အပိုင်း (၂)၊ အပိုဒ် ၅ (က) တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ ပြန်လည်ညှိနှိုင်းထားသည့် လခထက် မလျော့နည်းစေရဘဲ ထုတ်ပေး ရမည်။
ထိုသို့ထုတ်ပေးရာတွင် သတ်မှတ်ထားသော နောက်ဆုံးလခထုတ်ရက်မှ ၇ ရက်ထက်ပိုပြီး နောက်မကျစေဘဲ ထုတ်ပေး ရမည်။ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားသဘောတူစာချုပ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော လစာကာလမှာ တစ်လထက် မပိုစေရ။
၇က။ အပိုဒ် ၆၊ ၇၊ ၇ခ တို့တွင်ဖော်ပြထားသည့် ပုံသေလစာဆိုသည်မှာ စုစုပေါင်းအခြေခံလစာ နှင့် လစဉ်ပုံသေခံစားခွင့်များကို ဆိုလိုသည်။
၇ခ။ အပိုဒ် ၇ တွင်ဖော်ပြထားသည့် ပြန်လည်ညှိနိုင်းထားသည့် လစာဟူသည် အပိုင်း ၂၊ အပိုဒ် ၅က အရ ပြန်လည် ညှိနှိုင်း ထားသော လခကိုဆိုလိုသည်။
၇ဂ။ အခြေခံလစာဆိုရာတွင် လတိုင်းပြောင်းလဲမနေသော ပေးစရာရှိသမျှအားလုံးပါသည့် ကန်ထရိုက်စာချုပ်ထဲတွင် ဖော်ပြထားသည့် ပုံသေလစာကို ဆိုလိုသည်။ သို့ရာတွင် ထိုလစာ၌ အောက်ပါတို့မပါဝင်ပါ။
ခ) အချိန်ပိုလုပ်အားခ၊ ဘိုးနပ်၊ ကော်မရှင်၊ နှစ်စဉ်ထပ်ဆောင်းပေးငွေ
ဂ) အခြားမည်သည့် ပေးငွေမဆို
ဃ) အလုပ်ခန့်ထားမှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ
င) စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ပေးသော ဆုကြေးငွေများ
စ) အလုပ်ရှင်က ပေးစရာရှိသော ငွေကြေးများ
ဆ) ဘောက်ဆူး၊ စုငွေ၊ ပင်စင်ကြေး စသည်
၇ဃ။ လစဉ်ပုံသေခံစားခွင့်ဆိုရာတွင် တစ်လနှင့်တစ်လ ပြောင်းလဲမနေသော ပုံသေခံစားခွင့်ကို ဆိုလိုသည်။ အထက် အပိုဒ် ၇ဂ။ ခ) မှ ဆ) အထိ ငွေကြေးများမပါဝင်ပါ။
၈။ MOM မှ လိုအပ်ချက်အရ ပြုလုပ်ရသော ဆေးစစ်ခြင်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို အလုပ်ရှင်မှ ကျခံရမည်။
၉။ အလုပ်ရှင်သည် ၎င်းကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် ၎င်းကိုယ်စားအခြားသူတစ်ဦးဦးအား FDW ကို အနိုင်အထက်မလုပ်ရ။ FDW အား အနိုင်အထက်ပြုခြင်းတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
က) ကိုယ်ထိလက်ရောက် သို့မဟုတ် နသားပါးယားပြုခြင်း သို့မဟုတ် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ခြိမ်းခြောက်မှုပြုခြင်း
ခ) အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် အခြားသူတစ်ဦးဦးက FDW ၏ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရေး သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေခြင်း
ဂ) အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် အခြားသူတစ်ဦးဦးက FDW ၏ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရေး သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်ခြင်းကို လျစ်လျူရှုထားခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပစ်ပယ်ထားခြင်း
ဃ) အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် အခြားသူတစ်ဦးဦးက FDW ၏ လူမှုဖူလုံရေး (welfare) ကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေခြင်း
၁၀။ အလုပ်ရှင်သည် FDW အား -
က) နေ့စဉ် နားချိန် လုံလောက်စွာပေးရမည်။
ခ) ၂၀၁၃၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပေးထားသော သို့မဟုတ် အသစ်လဲထားသော ၀ပ်ပါမစ်သမားများအတွက် နားရက် သတ်မှတ်ခြင်းမှာ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သဘောတူစာချုပ်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
၁၁။ အပိုဒ် ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄ တို့မှာ ၂၀၁၃၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပေးထားသော သို့မဟုတ် အသစ်လဲထားသော ၀ပ်ပါမစ် သမားများအတွက် ဖြစ်သည်။
၁၂။ အပိုဒ် ၁၃ အရ တနင်္ဂနွေနှင့် အများပြည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက်များအပါအ၀င် အလုပ်ရှင်သည် FDW အား ၇ ရက်တွင် (လုပ်အားခမရသော) နားရက်တစ်ရက်ပေးရမည်။ ထိုနားရက်သည် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား သဘောတူထားသည့် အတိုင်း ၇ ရက်တစ်ပတ်အတွင်း မည်သည့်ရက်မဆို ဖြစ်နိုင်သည်။
၁၃။ အကယ်၍ အောက်ပါအတိုင်း အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား နှစ်ဦးသဘောတူ စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားမည်ဆိုပါက အပိုဒ် ၁၂ တွင် မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အလုပ်ရှင်သည် FDW ကို နားရက် ၁ ရက်ပေးရန်မလိုပေ။ စာချုပ်၌ပါသည့်အတိုင်း ထို နားရက်၌ အလုပ်လုပ်ခြင်းအတွက် FDW သည် လုပ်အားခ ရရမည်။
က) အနားယူရက်တွင် အလုပ်လုပ်ရန်
ခ) အနားယူရက်တွင် အလုပ်လုပ်ခြင်းအတွက် -
၁) အခကြေးငွေမရပဲ နားရက် အစားတစ်ရက် ပြန်ပေးရန် (ထို အစားထိုးနားရက်သည် ထိုလအတွင်းသာဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်ရှင် အလုပ်သမားနှစ်ဦးနှစ်ဘက် သဘောတူထားရမည်။)
၂) ထို နားရက်တွင် အလုပ်လုပ်ခြင်းအတွက် သာမန်လုပ်ခထက် မလျော့နည်းသော လုပ်အားခကို ပေးရန်
၁၄။ အပိုဒ် ၁၂ နှင့် ၁၃ အတွက် -
က) တနင်္ဂနွေနှင့် အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်ကို နားရက်အဖြစ် ပေးပါမည်ဟု အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား နှစ်ဦးသဘောတူ ထားပါမှ တနင်္ဂနွေနှင့် အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်ကို နားရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရမည်။
ခ) အကယ်၍ နားရက်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော ၇ ရက်သည် ၂ လတွင် ခွပါနေပါက မည်သည့်လတွင် နားရက်ယူမည်ကို
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား နှစ်ဦးသဘောတူ ထားရမည်။
ဂ) အပိုဒ် ၁၃ တွင်ဖော်ပြထားသော နားရက်တွင် အလုပ်လုပ်ခြင်းအတွက် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား နှစ်ဦးသဘောတူ ထားရမည်။
ဃ) အပိုဒ် ၁၃၊ ခ) ၂) တွင်ဖော်ပြထားသော နားရက်တွင် အလုပ်လုပ်ခြင်းအတွက် တစ်ရက်လုပ်ခ အခကြေးငွေမှာ အခြေခံ လစာကို ၂၆ နှင့်စား၍ တန်ဘိုးဖြစ်သည်။
င) ထို နားရက်တွင် အလုပ်လုပ်ခြင်းအတွက် ရရမည့် လုပ်ခကို အလုပ်ရှင်က FDW အား လာမည့် အနီးဆုံးထုတ်ရမည့် လခတွင် ထည့်ပေးရမည်။
၁၅။ အလုပ်ရှင်သည် FDW အား တရားမ၀င်သော၊ အကျင့်ပျက်စေသော၊ ကိုယ်ကျင့်တရားအရ မလိုလားအပ်သော မည်သည့်အပြုအမူ၊ အလုပ်မျိုးကိုမှ ခွင့်မပြုရ။
၁၆။ အလုပ်ရှင်သည် FDW ၏ မူရင်း ၀ပ်ပါမစ်ကဒ်ကို သိမ်းဆည်းထားပိုင်ခွင့်မရှိ။ FDW အားသာ မူရင်း ၀ပ်ပါမစ်ကဒ်ကို သိမ်းဆည်းထားစေရမည်။
၁၇။ အကယ်၍ ၀ပ်ပါမစ်ကဒ်ပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသော အိမ်လိပ်စာပြောင်းသွားသည်ဆိုပါက အလုပ်ရှင်သည် MOM သို့ ပြောင်းသည်မှ ၁၄ ရက်အတွင်း အကြောင်းကြားရမည်။
၁၈။ အကယ်၍ FDW သည် စင်ကာပူနိုင်ငံအတွင်း သေဆုံးခဲ့ပါက အလုပ်ရှင်သည် သေဆုံးသူ FDW ၏ မိသားစု၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ -
က) အောက်ပါစရိတ်များကို ကျခံရမည်။
၁) စင်ကာပူနိုင်ငံအတွင်း သဂြိုဟ်စရိတ်
၂) စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ သဂြိုဟ်ပြီး ပြာအိုးကို မိခင်နိုင်ငံသို့ ပြန်ပို့စရိတ်
၃) အလောင်းကို မိခင်နိုင်ငံသို့ ပြန်ပို့စရိတ်
ခ) FDW ၏ ကျန်ခဲ့သော ပစ္စည်းများကို မိသားစုထံ ပြန်ပို့စရိတ်
ဂ) FDW အားပေးရန်ကျန်ရှိသော လခအားလုံး
၁၉။ အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်ရှာအေးဂျင့်မှသော်လည်းကောင်း၊ အခြားသူတစ်ဦး တစ်ယောက်ထံမှသော်လည်းကောင်း FDW အား အလုပ်ခန့်ထားခြင်းအတွက် အခကြေးငွေ တစ်စုံတစ်ရာ မတောင်းရ။
၀ပ်ပါမစ်အား ပယ်ဖျက်ခြင်း (cancellation) နှင့် FDW အား ပြန်မပို့မီနှင့် ပြန်ပို့ချိန်တွင် ရှိသော တာဝန်များ
၂၀။ ၀ပ်ပါမစ်အား ပယ်ဖျက်ပြီး အလုပ်ရှင်သည် ၀ပ်ပါမစ်ကဒ်ကို ၇ ရက်အတွင်း MOM သို့ ပြန်ပို့ရမည်။
၂၀က။ အလုပ်ရှင်သည် FDW စင်ကာပူတွင်ရှိနေစဉ်အတွင်း စားဝတ်နေရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတို့အတွက် ကုန်ကျမှုအစုစုကို ကျခံရမည်။
၂၀ခ။ အလုပ်ရှင်သည် FDW အတွက် သင့်တော်သော နေရာထိုင်ခင်း စီစဉ်ပေးရမည်။ ထိုနေရာထိုင်ခင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းမှ သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်။
၂၁။ အပိုဒ် ၂၂ တွင် ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ FDW ၏ ၀ပ်ပါမစ်ကဒ် သက်တမ်းကုန်လျှင် သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခံရလျှင် (နှင့်) ထို FDW အား အခြားအလုပ်ရှင်အသစ်ထံ အလုပ်ခန့်မထားမီ အလုပ်ရှင်သည် FDW ကို မိခင်နိုင်ငံထံပြန်ပို့ရန် လေဆိပ်သို့ လိုက်ပို့ရမည်။
၂၂။ အပိုဒ် ၂၁ တွင်ဖော်ပြထားသည်မှအပ အောက်ပါအခြေအနေတွင် အလုပ်ရှင်သည် FDW ကို မိခင်နိုင်ငံထံ ပြန်ပို့နိုင်သည်။
၁) FDW သည် အိမ်ပြန်ချင်ပါသည်ဟု တောင်းဆိုလာလျှင် (နှင့်) အလုပ်ရှင်သည် ပြန်မပို့မီ MOM သို့ ကြိုတင်အကြောင်းကြား ထားလျှင်
၂) MOM က ပြန်ပို့ခိုင်းလျှင်
၂၃။ MOM က ခွင့်ပြုသည်မှလွဲ၍ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ပြန်ပို့သည်ဖြစ်စေ FDW အား ပြန်ပို့စရိတ်ကို အလုပ်ရှင်က ကျခံရမည်။ အလုပ်ရှင်သည် FDW အား ၎င်းရစရာရှိသော လခနှင့် အခကြေးငွေအားလုံးကို ပြန်မပို့မီ အကျေပေးရမည်။
=============== ပြီး၏။ ===============
မူရင်းလင့် - http://www.mom.gov.sg/documents/services-forms/passes/wpspassconditions.pdf
No. S 569 : EMPLOYMENT OF FOREIGN MANPOWER ACT; EMPLOYMENT OF FOREIGN MANPOWER (WORK PASSES) REGULATIONS 2012, FOURTH SCHEDULE, PART I.
CONDITIONS TO BE COMPLIED WITH BY EMPLOYER OF FOREIGN EMPLOYEE WHO IS DOMESTIC WORKER ISSUED WITH WORK PERMIT
Posted by အေးငြိမ်း at 5:49 PM
အမျိုးသား ကျွမ်းကျင်မှုစံနှုန်း (National Competency...
မအားသဖြင့် စာမရေးနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း
နိုင်ငံခြားသားများအား အလုပ်ခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ ဥပေ...
မတ်လ (၁) ရက်၊ ၂၀၁၄ ရက်နေ့ UMFCCI ဟောပြောဆွေးနွေးပဲ...